I-Orthophos 3D X-Ray | I-OptiSmile ™ Advanced Dentistry eKapa
X-Rays Kwenziwe at OptiSmile
Xoxa ubone imiphumela
Buka Amazinyo Akho Njengangaphambili
I-OptiSmile Advanced Tech
i-Orthophos 3D X-ray ibona konke.
Ukuba nama-X-ray wamazinyo athathiwe ngokuvamile kungaba yingxenye yokuvakashelwa odokotela bamazinyo. Ziyithuluzi elibukwayo eliwusizo kakhulu elingasiza udokotela wamazinyo ukusungula isimo samazinyo nezicubu ezingabonakali ngesikhathi sokuhlolwa komlomo okujwayelekile. Zisiza kakhulu ekuboneni izinkinga ezingaba khona, ngaphambi kokuba ziqale ukudala izinkinga ezinkulu.
kungani uze optismile
I-OptiSmile ingenye yezindlela zokuqala zamazinyo zokusebenzisa i-Orthopos 3D Dental X-ray. Lokhu kusho ukuthi lapho uvakashela umkhuba wethu uzozuza kwinsiza yamazinyo yokuxilonga ehamba phambili emhlabeni. Ukuba namathuluzi okubuka angcono, athuthuke kakhulu esinakho kusivumela ukuthi senze izincomo ngokususelwa ezithombeni ezinembe kakhulu.
Ngaphandle kokuba ithuluzi lokuxilonga elinembe kakhulu, ubuchwepheshe be-3D X-ray obusetshenziswa yi-OptiSmile busebenza ngokubambisana ne I-CEREC & Umklamo we-Digital Smile, okuyibo bobabili ubuchwepheshe obusetshenziswa yithi ukusiza ezinkambisweni ezisezingeni eliphakeme zokubuyisela esimweni, okubandakanya okufakelwa emzimbeni kanye nezinto ezisetshenziswayo.
Iqiniso lokuthi sinabo kakhulu lobu buchwepheshe obutholakalayo, lisho ukuthi singakunika izixazululo ezinhle kakhulu zokumamatheka kwamazinyo ngaphandle kokuthi sibuyele emihlanganweni eminingi. Senza izinqubo eziningi, sisukela kokujwayelekile kuya kwezinqubo ezisezingeni eliphakeme zezimonyo. Uma ungathanda ukuthola eminye imininingwane mayelana nezinqubo zethu noma ungathanda ukubhuka i-aphoyintimenti, ungakwenza lokho nge-WhatsApp, ifoni noma i-imeyili. Sikulungele ukuphendula noma imiphi imibuzo ongayithola.
ama-orthophos ama-X-Rays ngobukhulu obu-3
Njengengxenye yokuzibophezela kwethu ekuhlaleni phambili emisha yamazinyo, siya lapho ubuchwepheshe busiyisa khona. Ukuba neyodwa yamadivayisi we-Orthophos x-ray emhlabeni kuyisivumelwano salokhu kuzibophezela. I-Orthophos SL 3D ingukutshalwa kwezimali kwethu okukhulu kwezokwelapha kwamanje kuze kube manje. Isithwebuli se-x-ray esidijithali esingu-360 ° esikhiqiza izithombe ezibukhali kakhulu ezitholakalayo. Lokhu kusivumela ukuthi sinikeze izincomo ezingcono kakhulu nokunakekelwa okungenzeka. Le nqubo ingaqedwa kwa-OptiSmile futhi inikeze imiphumela yokubuka esheshayo.
Ngabe Umuntu Udinga Nini i-3D X-Rays?
Ngokuvamile sizoncoma ukuthi kwenziwe ama-X-ray ezimeni ezilandelayo:
Lapho kunezindawo zomlomo ezidinga ukuhlolwa ngoba ukuhlolwa ngomlomo akukwazanga ukunikeza ulwazi olwanele
Ngaphambi kwezinqubo zezimonyo ezeqisayo zokusiza ngokulungiselela ukufakelwa, ama-veneer, amazinyo okufakelwa noma izinsimbi
Thola futhi uveze ukulahleka kwethambo okuhambisana nesifo sezinsini noma ukuguqulwa kwesakhiwo samathambo ngenxa yokutheleleka
Dalula isikhundla sezimila noma ama-cysts
Thola indawo ngqo yamathumba emlonyeni
Bheka ukuthi kunesikhala esanele yini emlonyeni womuntu esilingana namazinyo angenayo
Gada ukuthuthukiswa kwamazinyo okuhlakanipha ukuze ubone ukuthi athintekile noma cha
Kwenzekani Ngesikhathi se-3D X-ray Process?
Uma ungena kokubonisana no-OptiSmile, udokotela wamazinyo wakho uzokhuluma nawe ngempilo yakho ejwayelekile neyamazinyo kanye / noma yiziphi izinqubo zamazinyo ongabe usunazo engqondweni. Lokhu kungenzeka kulandelwe ukuhlolwa kwamazinyo ngemuva kwalokho kunganconywa i-X-ray ukusiza udokotela wamazinyo ukuthi anqume indlela yokwelashwa engcono kakhulu. Inqubo ye-3D X-ray isebenza kanjena:
Kusetshenziswa ubuchwepheshe obubizwa ngokuthi ugongolo lwamazinyo lwesigaxa olunamakhompiyutha tomography (CBCT), izinkulungwane zezithombe ezincane zidalwa ngenkathi ama-Orthophos ephepha futhi enza kahle ukuskena okugcwele okuzungeze umlomo wakho
Izithombe eziqonde kakhulu zihlanganiswa ndawonye ukwakha isithombe esibukhali se-x-ray noma isithombe se-3D.
Lesi sithombe silayishwa ngokushesha kumakhompyutha ethu kusetshenziswa isoftware ekhethekile ukuze ukwazi ukubuka izithombe nathi.
Ama-X-Rays Ngobukhulu Obuthathu
Kungani Uza ku-OptiSmile